ဆေးလိပ်​​သောက်​ခြင်းအတွက်​ အကျိုးဆက် - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ဆေးလိပ်​​သောက်​​​​တာ ကိုယ်​ပိုက်​ဆံနဲ့ ကိုယ်​​သောက်​တာ ဘာဖြစ်​လဲ ?
ပိုက်​ဆံမကုန်​ မိမိကိုယ်​တိုင်​ မ​သောက်​​ပေမဲ့ ​သောက်​သုံးသူရဲ့အနားမှ ဆေးလိပ်​အ​ငွေ့​တွေ ရှူရှိက်​မိပါက ဘာဖြစ်​လဲ ?
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်​ပါသည်​ ဆိုခြင်းကိုလူတိုင်း သိရှိ နားလည် လက်ခံထား​ကြ​ပေမဲ့ ​​ဆေးလိပ်​​သောက်​ကြပြန်ပါတယ်​
ဦးစွာ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အမျိုးသားတွေမှာ ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်တတ်သလို သုတ်ပိုး အရည်အချင်းတွေလည်း ညံ့ဖျင်းတတ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်​ ကိုယ်ဝန်ရဖို့ အချိန်ကြာတတ်ပြီး ကလေးပျက်ကျနှုန်း များပါတယ်။ လမစေ့ မွေးတာ ဒါမှမဟုတ် ပေါင်ချိန်မပြည့် မွေးတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီးတို့ အား သောက်သုံးခြင်းဖြင့် Schizophrenia ဟု အမည်ရသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမားရေး ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်စေကာ ဥာဏ်ရည်ပိုင်း ထိခိုက်မှု ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ​ကြောင့်​
ဆေးလိပ်များစွာသောက်သုံးသူများတွင် သာမန်လူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဥာဏ်ရည်သိသာစွာ ကျစေပါသည် ။ သင် ဆေးလိပ်သောက်တာကြောင့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူတွေ​ရောဂါရတတ်ပါသည်​။
ကင်ဆာရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ နာတာရှည်လေပြွန်ရောင်ရမ်းနဲ့ ရင်ကျပ်ပန်းနာ ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်​ ပြီး​တော့ပျှမ်းမျှသက်တမ်း ၁၀ နှစ်ပို တိုသွားနိုင်​ပါတယ်​။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်​ဆေးလိပ်သောက်သူတွေဟာ အရိုးထုစုဆောင်းမှု နည်းစေတာကြောင့် ကြီးလာရင် အရိုးပါးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားနိုင်​သလုိ မိခင်​ဝမ်းမှ ​ခြေလက်​အင်္ဂါ စုံညီစွာ ​မွေးဖွားလာပြီး
​ဆေးလိပ်​​သောက်​ခြင်း​ကြောင့်​ ​သွေး​ကြော​တွေပိတ်​လာပြီး ​ခြေပုတ်​ လက်​ပုတ်​ဖြစ်​ခါ မိမိ၏
​ကောင်းမွန်​​သော ​ခြေလက်​ အင်္ဂါများ ဖြတ်​​တောက်​ခံရနိုင်​ပါသည်​ ။
ဆေးလိပ်ကို မသောက်ရ မနေနိုင်၍ ဆေးလိပ်၊ စီးကရက်ကြိုက်တတ် သူများသည် အိပ်ရာမှ နိုးလျှင်ပင် မီးခြစ်နှင့် ဆေးလိပ်ကို ဦးစွာရှာတတ်လေ့ ရှိပြီး နံနက်ပိုင်းသောက်သော ပထမဆေးလိပ်(စီးကရက်) တစ်လိပ်သည် အဆုတ်၊ ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်းတို့၌ ကင်ဆာဖြစ်ရန် မိမိကျန်းမာ​ရေးဆိုးရွား​စေမှု့အတွက်​ ဆိုးကျိုးများ ထပ်​မံလာပြန်​ပါသည်​။
ဒါ​ကြောင့်​ငွေ​ကြေးလည်းကုန်​သည့်​အပြင်​ ကျန်းမာ​​ရေးအတွက်​ ဆိုးကျိုး​ရောဂါ​များ ​ဖြစ်​ပါ်​စေ သည်​ ။
ဘာဖြစ်​လဲ? အတွက် မိမိကျန်းမာ​ရေးကို
​အဲလိုမျိုး​တွေ ဖြစ်​မယ်​ ဖြစ်​လာမယ်​ ဖြစ်​လာမည်ေ​တွလည်း ပိုမိုမြင့်​မားလာ​​​​စေသည့်​ ​ဆေးလိပ်​ စီးကရက်​ပင်​ဖြစ်​ပါ​တော့သည်​ ။